Arimaha Bulshada – Page 3 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Archives»Arimaha Bulshada (Page 3)
Galmudug oo Xariirka U Jartay Dowladda dhexe Ee Soomaaliya
By admin on 30/05/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyadda galmudug ayaa lagu hakiyay wada shaqeyntii kala dhexeeysay Dowladda Soomaaliya. Galmudug waxaa ay joojisay xiriirkii wada shaqeyneyd ee dowladda federaalka inta heshiis siyaasadeed laga gaarayo arrimaha; dhameystirka dastuurka, doorashooyinka federaalka iyo amniga qaranka. Sidoo kale Warsaxaafadeed oo aad u dheeraa ayaa galmudug waxaa ay beesha caalamka ka dalbatay inay si […]
Shil gaari oo Khasaaro Geystay Oo ka dhacay duleedka Garoowe.
Wararka ka imaanaya Gobalka Nugaal ayaa sheegaya in shil gaari oo khasaaro nafeed geystay uu ka dhacay magaalada Garoowe ee Gobalkaasi. Shilka ayaa ka dhashay kadib markii gaari xaamul ah oo ka yimid dhinaca magaalada Garoowe uu dul maray gaari nooca raaxada oo ka yimid dhanka degmada Qardho ee Gobalka Bari. Inta la xaqiijiyay 2 […]
Dagaal khasaaro Geystay Oo ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay degmada Afmadow ee Gobolkaasi ay ku dagaalameen Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbland oo dhinac ah iyo Ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerarku qaadeen saldhig Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin degmadaas Afmadow,waxaana goobjoogayayaal ay sheegeen in dagaal […]
Dhalinyaro Soomaaliyeed Oo lagu Maxkamadeynayo Seychelles
Maxkamada Sare ee Jaziirada Seychelles ayaa la soo taagay 5 Nin oo Soomaali ah,kuwaas oo lagu eedeeyay falal la xiriira burcad badeednimo. Booliska dalkaas ayaa waxaa ay sheegeen in Shantaas Ruux ee Soomaalida ah ay Bishii Apriil ee sanadkaan ay kala soo wareegeen Ciidamada Midowga Yurub ee la-dagaalama Burcad Baddeeda Soomaalida. 29-kii Bishaan oo ku […]
By admin on 15/05/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Intii Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare uu ku sugnaa Magalada Garoowe waxaa uu kulamo mira-dhalay la qaatay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni,iyaga oo kala saxiixday dhowr heshiis. Heshiisyada ayaa waxaa ka mid ahaa in Puntland ay siideyso dad kasoo jeeda deegaanada Hir-Shabeelle oo Maxaabiis ahaan ugu xeran deegaanada Maamulkaasi Puntland si uu u dhexmaro […]
Go’aan Laga soo saartay Ajaanibta ka Shaqeeysa Degaannada Maamulka Puntland
Wasaaradda Shaqada iyo shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad Goboleedka Puntland ayaa amar dul-dhigtay Shaqaalaha Ajaanibta ah ee ka howlgalla deegaanada Puntland, kadib War-Saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda. War-Saxaafadeedka ayaa dhammaan waxaa lagu amray shirkadaha iyo hay’adaha kala duwan ee ka hawlgala degaannada Puntland, in ay mudda bil gudaheeda ku soo gudbiyaan xogta shaqaalahooda oo dahmeystiran. Wareegto […]
DHAGEYSO: Guddoomiyaha ururka dhalinyarada Hirshabeelle oo Baladweyne uga dhwaaqay in doorashada guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan dib loo dhigay
By admin on 07/05/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Talaado, May, 07, 2019 (HNN)– Munaasabadan oo ahyed mid lagu taageryay wasiirka dhalinyrada iyo ciyaaraha maamulka hirshable mudane Cabdi qani jeenyo isla markaana lagu caleemo saarayay gudoomiyaha dhalinyarada hirshable maxamed cabdulahi buraale ayaa waxaa kazoo qeeybgalay duqa magaalada Baladweyne masuuliyiin kasocotay ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha Ururka Haweenka gobolka Hiiraan Farxaan […]
DHAGEYSO: Culumaaudiinka Baladweyne oo shacabka ka codsaday in maalinta khamiista ay u soo baxan banaanbax roob doon ah
Talaado, May, 07, 2019 (HNN)– Culumaaudiinka magaalada Baladweyne ayaa ka codsaday shacabka magaalada in maalinta khamiista ee soo socota ay u soo baxan banaanbax roob doon ah oo ka dhici doona iskuulka mujamac iyo suuqa xoolaha xaafadda howlwadaag. Warbixintan waxaa noo haya Aadan Cabdi Axmed.
Boeing oo qiratay inay ogeyd cilladda ridday diyaaradihii burburay
Talaado, May, 07, 2019 (HNN)– Shirkadda diyaaradaha farsameysa ee Boeing ayaa markii ugu horreysay qiratay inay horay uga warqabtay ciladihii ku yimid diyaaradihii burburay. Mas’uuliyiinta Boeing ayaa shaaca ka qaaday in arrintan ka war heleen hal sano ka hor inta aysan diyaaradaha galin shilalka khasaaraha badan dhaliyay, hase yeeshee aysan wax tallaabo ah qaadin. Shirkadda […]
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay safiirka UK
By admin on 27/04/2019 Arimaha Bulshada, Wararka HNN
Sabti, April, 27, 2019 (HNN)– Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay wafti balaadhan oo uu hogaaminayo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya Ambassador Ben Fender. Madaxweynaha Puntland ayaa ka warbixiyey kulanka muhiim ka ah ee uu la qaatay safiirka dalka Ingiriiska ee Soomaaliya. ”Waxaa maanta magaalada Garoowe nagu soo booqdey […]